Methasterone Steroid nke kachasị ike (Superdrol) Prohormone
/blog/Methasterone (Superdrol)/Methasterone Steroid nke kachasị ike (Superdrol) Prohormone
Ihe na 03 / 24 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na Methasterone (Superdrol).
1. Kedu ihe bụ Methasterone (Superderol)? 2. Kedu ngwaahịa nwere Methasterone ntụ ntụ?
3. Methasterone Ọkara Ndụ 4. Oge nchọpụta Methasterone
5. Methasterone Medical Use 6. Methasterone Bodybuilding Benefits
9. Methasterone Cycle na Methasterone Dosage 10. Mmetụta Methasterone
11. Methasterone Side Effects 12. Methasterone maka ire
Kedu ihe bụ Methasterone (Superderol)?
N'okwu dị mfe, Methasterone, nke a makwaara dị ka methyldrostanolone, nke a na-erekarị n'okpuru aha aha Superdrol, bụ otu n'ime ọgwụ synthetic na nke na-arụsi ọrụ ike anabolic-androgenic steroid (AAS). Nke a na-ahụkarị ndị na-eme egwuregwu, ndị na-eme egwuregwu, na ndị na-achọ ịkwado ahụ ike. Ọ bụrụ na ịnweta ọgwụ a ugbu a, lee nkọwa zuru ezu nke Methasterone nke ga-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma banyere ya.
Ọ bụ ihe ndị metụtara kemịkal bụ:
Aha aha Methasterone: UNII-GH88DY98MR
Aha ọzọ: methyldrostanolone
Aha aha: Superdrol
CAS Mba: 3381-88-2
Ụdị Mkpụrụkpụ: C21H34O2
Ọkara Mkpụrụ: 318.501 g / mol
Melting Point: 223-2250C
Ntucha Boiling: 423.80C
Ọkara ndụ: 8 awa
Akụkọ nke Methasterone ntụ ntụ ụbọchị laghachi na 1956, mgbe a chọpụtara ya n'oge nnyocha nke ụlọ ọrụ na-ere ọgwụ na-emepụta aha ọma, Syntex Corporation mere. Ebumnuche nke nchọpụta ahụ bụ ịchọta onyinye nwere ọgwụ ndị nwere ike inyere aka cancer cancer. Ọ bụ n'oge ha na-achọ ebe a na-egbochi ọrịa cancer nke ndị na-eme nchọpụta sụgharịrị na Methasterone (Superdrol).
Ọ bụ ezie na Methasterone (superdrol) egosighi ọtụtụ ngwongwo ndị na-egbochi ya, ọ pụtara na ụlọ ahụ nwere ihe ndị ọzọ dị mma. Na nyocha ndị ọzọ, achọpụtala na Methasterone (superderol) nwere ụdị ndụ nke methyltestosterone, ebe ọ bụ 20 pasent dị ka androgenic na 400% dị ka anabolic, na-ekwenye na etrogenic (ana-akpọkwa dị ka Q-ratio) nke 20.
Ọ bụ ezie na achọpụtara na Methasterone (superderol) azụ na 1950s, ọ dịghị mgbe ọ na-ere ahịa maka ọha na eze dịka ọgwụ ọgwụ. A naghị anụ ya ruo mgbe 2005, mgbe ọhụrụ achọpụtara mmasị na ụlọ ahụ gosiri na Methasterone (superderol) bụ ihe anabolic karịa androgenic. Akuko ozi a bu ihe ndi mmadu na-achikota dika o choro na oria ogugu ndi mmadu nwere karia ugbua o nwere ike imetu hormones.
Kedu ngwaahịa nwere Methasterone ntụ ntụ?
Superdrol bụ ngwugwu a maara nke ọma nke nwere Methasterone ntụ ntụ. Ngwaahịa ahụ kụrụ ụlọ nke ụlọ ọrụ na-emewanye ihe na 2005. N'okpuru aha aha Superdrol, a na-ere ya dị ka ihe oriri ma ọ bụ prohormone ma nwee nnukwu ọganihu. Na 2006, ngwaahịa ahụ mere ka anya FDA ma kwụsị ya.
Ọ bụ ezie na a machibidoro Superdrol iwu, ahịa ndị ojii na ndị Methasterone na-enweghị ihe ọ bụla nọgidere na-aga ahịa. Na 2012, a na-agbakwunye ọgwụ ahụ na njikwa ihe ndebe na United States nakwa na ndepụta World Anti-Doping Agency (WADA). Ọzọkwa, a na-ekepụta Superdrol dị ka ihe eji emezi oge nke III na-achịkwa ihe dị ka ndị ọzọ AAS.
Taa, Methasterone, onye CAS Number bụ 3381-88-2, ka a na-ejikarị ya eme ihe na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe na ọtụtụ ndị na-ewere ya na ọ bụ otu n'ime steroid kachasị ike dị. Ị ka ga-ahụ ya na ahịa dịka Methasterone, Superdrol, ma ọ bụ Methyldrostanolone.
Enwerekwa mgbanwe nke Superdrol dị ka Dymethazine. Ọ bụ ezie na ọ nwere otu ihe ndị ahụ dịka Superdrol, Dymethazine bụ iwu zuru oke na US. Ndị ọzọ na-ebu Methasterone ntụ ntụ gụnyere Superdron, SD Extreme, Beastrdol, Phreak, na Maxdrol.
Methasterone Ọkara Ndụ
Methasterone ọkara ndụ dịka awa 8
Oge nchọpụta Methasterone
Dị ka ụfọdụ n'ime data ahụ si dị, oge nchọpụta methasterone na-agbadata site na ụbọchị atọ ruo ụbọchị 10.
Methasterone (superderol) enwebeghị ahịa maka iji ọgwụ. Nke a pụtara na ọ dịtụbeghị ọgwụ ọgwụ ọgwụ. Ka o sina dị, a na-erekarị steroid nke Methasterone ka ọ bụrụ ihe mgbakwunye nri nri n'elu.
Na ụfọdụ n'ime ọmụmụ Methasterone, a gosipụtara steroid a iji mee ka ahụike mmadụ n'ozuzu ya. A na-ekwenye na imeziwanye ihe ndị na-ehi ụra mgbe ọ na-enyekwa onye ọrụ ahụ nkwalite ntụkwasị obi. Tụkwasị na nke ahụ, ejikọtara Methasterone na mmetụta nke obi ụtọ na echiche ziri ezi zuru oke maka ndụ.
Eleghị anya ị ga-eche - gịnị ka Methasterone mere? Mbụ, ọ na-eme ka ike gị dị elu, na-enye gị ohere inwe mmemme mgbatị ndị ọzọ. Nke abuo, ọ na-enye gị ume mmesi ike, na-enye gị ohere ibuli ọkwa dị arọ karị. Nke ato, ọ na-enye ntachi obi gị, na-enye gị ohere ịtachi obi mgbatị dị ogologo. Mmetụta ụbụrụ methasterone dị ịtụnanya, ya na ike dị elu, ume dịwanye elu na nkwụsi ike na-aga n'ihu, ị ga-enweta Methasterone uru dị ka:
1. Ọkpụkpụ Egwuregwu
Methasterone mmepụta ahụ na-eme ka mmụba gị dị arọ. Ị nwere ike nweta 10 lbs (ma ọ bụ karịa) nke uru ahụ dị ọcha dị n'ime izu anọ. Ọbụna akụkọ kachasị mma bụ na steroid a bụbolic na-enwe ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mgbanwe na estrogen na ọ dịghị oke nke ị na-enweta bụ ibu mmiri. Eziokwu ahụ bụ na uru a na-enweta bụ kpamkpam akọrọ, ọ nwere ike ịkwagide ruo ogologo oge.
2. Ebufu ibu
O doro anya na mmega ahụ bụ ụzọ dị mma ị ga-esi kpochapụ abụba buru ibu ma nweta ahụ ike, kama ịgbakwunye steroid steroid na usoro nlekọta ahụike na-eme ka ihe dị iche. Ebe ọ bụ na steroid steeti Methasterone na-enye gị ohere ịtachi obi na-arụsi ọrụ ike, ị ga-enwe ike ịmịkwuo calorie mgbe ị na-eme egwuregwu. Ọzọkwa, ọgwụ a nwere ike inyere gị aka ịrapara nri na-enweghị kaadị calorie ma ka na-enye gị ohere ịbawanye ibu ahụ gị. Site na ngwaahịa a, ọ ga-abụ nnọọ ihe ga-eme ka ị nweta ahụ ike ghara ibu ibu n'otu oge.
Methasterone (superderol) nwere ike iji mee ihe. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere protein na oke dị elu ma na-eme ka mmepụta mkpụrụ ndụ nke na-eme ka ị nwee ike ịzụ ahụ ike. A na-enwe ike ịmịcha nke methasterone n'ime izu ise. Naanị otu ọnwa, ị nwere ike ịtụ anya ịnweta 8-10 lbs.
Methasterone (superderol) pụkwara iji maka ịcha. Nke a bụ n'ihi na ọ na-agbachapụ ụba abụba n'ahụ. Ọzọkwa, ọ gbapụtara ahụ gị nke na-eme ka ahụ dị gị mma, bụ nke na-ekpochapụ ihe ndị na-emerụ ahụ n'ahụ gị. Site na itinye ego ole na ole na steroid na Methasterone, ị nwere ike ịmepụta mkpụmkpụ na obere ihe na oge. Maka nsonaazụ kacha mma, ọ dị mkpa ka ị na-emega ahụ mgbe niile ka ị na-aga n'ihu na Methasterone Cycle.
Ihe ndị ọzọ methasterone gụnyere:
5. Ọ na-eme ngwa ngwa
Otu ihe banyere Methasterone nke na-emetụ ndị na-emepụta ahụ, ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme ahụ ike bụ ọgwụ ọjọọ nke ọgwụ a. Mmetụta nke methasterone na ahụ dị ngwa ngwa karịa ọgwụ ọjọọ ndị ọzọ. Naanị izu 4, ị nwere ike nweta ebe ọ bụla site na 8 gaa na 10 pound nke ụyọkọ akwara. Nke a dị nnọọ mma, na-eche na ọ na-ewekarị ọnwa maka ndị ọrụ iji nweta ụdị nsonaazụ ndị a.
6. Ọ nwere obere oge
Ọ bụ ezie na ụbụrụ nke Methasterone nwere usoro nke nanị izu 5, ị nwere ike mezue uzo Methasterone naanị na 3 izu. Nke a pụtara na ị nwere ike ịgafe ọtụtụ usoro cycle n'ogologo oge. Ọzọkwa, ị nwere ike ịgbatị oge mgbake gị iji belata mmetụta dị na Methasterone. Ụzọ dị mkpirikpi na-eme ka Methasterone bụrụ nhọrọ dị mma maka gị karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ onye na-atụgharị bọtịnụ maka onye na-eme ka ọkpụkpụ.
7. Ọ dị nwayọọ na imeju
Eziokwu ahụ bụ na usoro nke Methasterone na-aga n'ihu maka 3 ruo 5 izu pụtara na imeju gị ga-ekpughe na steroid anabolic a maka oge dị mkpirikpi. Nke a ga-enye afọ imeju gị iji weghachi. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ji Methasterone steroid gosipụtara nsogbu imeju dị nro mgbe ha na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe, nke pụtara na ọ dị nnọọ nchebe ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ steroid.
E nwere ihe mgbakwunye dị iche iche na ị nwere ike ijikọta ya na Methasterone steroid iji chekwaa imeju gị ma jigide ọbara mgbali na cholesterol n'ọkwa. Iji chekwaa imeju gị, ị ga-ewere 2g nke mmiri ara ehi thistle kwa ụbọchị iji nyere aka detoxify ma dozie mkpụrụ ndụ imeju gị.
Maka nkwado cholesterol, a gwara gị ka iwere 1.2 g nke osikapa na-acha ọbara ọbara kwa ụbọchị. Jide n'aka na ị na-ewere 100 mg nke CoQ10 kwa ụbọchị dịka yist osikapa nwere ike ibelata ọkwa gị CoQ10. Maka nkwado ọbara mgbado, jide n'aka na ị ga-ewere 2G nke bred bred kwa ụbọchị.
8. Ọ dịghị akwalite nkwụsị mmiri
Nke a bụ ezigbo steroid iji mee ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnya steroid nke nwere ike inyere gị aka ịkwụsị mmiri. Ị nwere ike ijikọ ọgwụ a na steroid iji nweta ihe dị ịrịba ama. Iji ya na mmiri ọgwụ mmiri na-efe ya ga-egbochi gị igbochi.
Dianabol, ma ọ bụ nanị Dbol, bụ ọgwụ anabolic na androgenic nke na-enye obere ọrụ mmepe. Dịka Methasterone 3381-88-2, Dbol dị ka usoro ọgwụ nke usoro III. Ọ nwere mmetụta miri emi na protein metabolism, ọ na-esikwa ngwa ngwa gafee imeju.
Ọ bụ ezie na a ghaghị iji steroid dị na Methasterone mee ihe na 20-30 mg maka opekempe izu 4, Dianabol ejiri ya mee ihe kwa ụbọchị na 20 mg kwa ụbọchị n'ihi na ọ bụghị karịa 8 izu. Nke a na-eme ka Dbol bụrụ ezigbo steroid maka ndị ogologo oge. Ka o sina dị, Methasterone (Superdrol) na-eduga n'inwe ike dị mma ma na-eme ka ahụ sie ike karịa karịa Dbol.
Ihe ọzọ na-eme ka Superdrol na Dianabol dị iche bụ ụgwọ. Superdrol dị na ọnụ ala dị ala tụnyere Dianabol. E wezụga ya ego, uru a na-enweta na Methasterone (Superdrol) nwere nkwụsị karịa Dianabol, na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ maka ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu.
Dịka Methasterone (supderdrol), Anadrol na-atụlekwa otu n'ime steroid kachasị ike. Mụ na Anadrol, a na-ahụ uru dị egwu na oke ike na ike na n'ime obere oge. Ọ na-abụkarị maka ndị ọrụ inwe mmụba ahụ dị elu nke 10-15 lbs naanị izu 2.
Otu n'ime esemokwu dị iche n'etiti Methasterone na Anadrol bụ usoro onunu ogwu. Ọ bụ ezie na ọgwụ Methasterone a na-atụ aro ya bụ 20-30 mg kwa ụbọchị, ezigbo Anadrol dosage bụ 50-200 mg kwa ụbọchị. Nke a pụtara na ọ dị gị mkpa iji ụbụrụ Methasterone dị ntakịrị karịa Anadrol.
Ọ bụrụ na ị na-eji Anadrol maka oge mbụ, a gwara gị na ị na-ewere naanị otu mbadamba Ntọala 50. Mgbe izu ole na ole gasịrị, ịnwere ike ịgbakwunye ụyọkọ kwa ụbọchị na mbadamba nkume abụọ, nke e weere n'ụtụtụ ma nke ọzọ na mgbede. Ndị na-atụ ihe karịrị 220 lbs nwere ike ime ka Anadrol dosage gaa 150 mg kwa ụbọchị na 3rd izu. Ọ dị mma ịmara na Anadrol na-eme ka ndị nabata ya ngwa ngwa, ya mere, ihe oriri ya ekwesịghị ịgabiga izu 6.
Esemokwu dị iche n'etiti ndụmọdụ Methasterone na Anadrol bụ na mmelite ndị Superdrol nwere na-akwụ ụgwọ karịa Anadrol. Nke a bụ n'ihi na uru a na-enweta bụ kpamkpam nkụ, ya mere a ga-akwagide ya ruo ogologo oge.
Otú ọ dị, na Anadrol, a na-emepụta ihe dị egwu nke a na - ahụ anya n'oge na - adịghị anya mgbe ihe oriri gasịrị ngwa ngwa. Nke a bụ n'ihi na ibu dị arọ bụ mmiri dị arọ, ya mere ọ na-efu ngwa ngwa mgbe ị kwụsịrị iji ọgwụ ahụ eme ihe.
Iji jigide ngwongwo muscle mgbe ihe gbasara Anadrol, ọ dị mma na ị ga-anọgide na-agwọ ọrịa ọgwụ na steroid ọzọ. Ọ bụrụ na i meghị otú ahụ, ị ​​ga-enwe oke mgbatị dị oke na oke ahụ ike na ị ga-alaghachi na ọdịdị mbụ gị. N'ezie, ọ dịghị ihe ọzọ na-akpata anabolic na androgenic na-eduga ná nkwụsị dị otú ahụ dị ukwuu dị ka Anadrol.
Methasterone Cycle na Methasterone Dosage
Ọtụtụ n'ime usoro usoro Methasterone ga-adịgide ebe ọ bụla site na izu anọ na isii. Mgbe ịmalite ịmalite ma ọ bụ ịmịlata Methasterone, ị gaghị eburu 10mg kwa ụbọchị n'izu mbụ. Na 2nd na izu 3rd, i nwere ike iweli onu ogugu kwa ubochi banyere 20mg.
N'ime izu nke anọ, ịnwere ike iweli usoro ọgwụgwọ na 30mg / ụbọchị maka nsonaazụ ọma. Na 10 izu Mgbanwe Methasterone, a na-atụ aro na ị na-ewere 250-500mg kwa izu nke Sustanon 250 maka izu iri. Jide n'aka na ị na-emega ahụ mgbe niile ka ị na-aga n'ihu.
Methasterone kachasị mma bụ 10mg taabụ / ọgwụ e wepụtara n'ụtụtụ na nke ọzọ e mere na mgbede. Ọ bụ ezie na ndị ọrụ nwere ahụmahụ nwere ike ibudata 40mg kwa ụbọchị, ndị na-ejibeghị steroid a anabolic kwesịrị ịgba ya ọsọsọ na 10-20mg kwa ụbọchị.
Methasterone (Suprderol) okirikiri
(Mmalite) 4-6 izu
(Di elu) 4-6 izu
Methasterone (superderol) maara maka inye ezigbo utịp. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ yiri ka ha na-abanye n'ihe dịka mpekere 10 maka izu anọ na isii. A chọpụtala na ụlọ ọrụ dị oke mma iji tinye ngwa ngwa n'elu akụkụ dị iche iche nke ahụ, gụnyere:
E wezụga inyere gị aka itinye uka, Methasterone (superdrol) na-eme ka ike gị dị ukwuu. Imirikiti ndị ọrụ na-etinye 50 pound na ihe ha na-ebuli elu na izu anọ. Mgbe ejikọtara ya na AAS ndị ọzọ, Methasterone tupu na mgbe ọ pụtachara ka mma.
Otu onye ọrụ nyochara ọgwụ ahụ wee sị, "10mg methasterone kwa ụbọchị na-arụ ọrụ nke ọma maka izu isii, naanị m nwetara nsonaazụ dị ịtụnanya. Ọgwụ a dị ezigbo mma. Hụrụ ya n'anya! "
Ihe kachasị emetụta methasterone gụnyere:
Mgbe a na-ahụ usoro ọgwụgwọ methasterone a na-atụ aro ya, a ga-ebelata mmetụta dị ukwuu nke methasterone. Ọ bụrụ na ihe mgbaàmà nke mmetụta mmetụta Methasterone siri ike, ọ ga-adị mma ka ị kwụsị iji ọgwụ na-achọ ọgwụ.
Methasterone maka ire
Ihe na-adọrọ mmasị bụ na ọ dị mgbe ọ bụla ịchọta Methasterone maka ire ere na ụlọ ahịa na-emefu mgbe niile. Ọ bụ ezie na a machibidoro ọgwụ ahụ na US, ọ pụtaghị na ị ka nwere ike zụta Methasterone. Ị nwere ike ịchọta Methasterone maka ire ere n'ịntanetị, karịsịa site na UK na China ebe ọ ka dị iwu. Methasterone UK na China dị maka ire ere n'okpuru ọtụtụ aha aha. Ọnụ ọka Methasterone abụghị ihe na-echegbu onwe gị n'ihi na ọgwụ ahụ na-abịa na ọnụ ahịa dị mma-ọnụ ahịa na-atụle ya na ọgwụ ndị yiri ya.
Van Enoo, Peter & Frans T. Delbeke (2006). "Metabolism na excretion nke steroids anabolic na njikwa doping. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 101: 173.
Julius A. Vida (1969). Androgens na Anabolic Agents: Chemistry na Pharmacology. Ụlọ akwụkwọ Ọkụ. 23 & 168.
Ringold, HJ, E. Batres, E. Necoechea (1959). "Steroid. 2-Methyl & 2-Hydroxymethylene-androstane Derivatives ". Akwụkwọ akụkọ nke American Chemical Society. 427-432
Ihe niile gbasara Trenbolone Enanthate ntụ ntụ Masteron (Drostanolone propionate) Mmetụta, Ụdị, Mmetụta mmetụta